Pursim Yazivisa Laptop Tamper Kudzivirirwa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo inozivikanwa femu Purism yazivisa kiyi nyowani yekuchengetedza inonzi Librem Kiyi, zvakadii zvaitarisirwa nenharaunda. Iyo pendrive yekuvandudza kuchengetedzwa kwemalaptop edu uye iyo inowanikwa yekutenga seyekutanga uye chete smart kadhi yakavakirwa paOpenPGP inopihwa pamusika, inovandudza chengetedzo mhinduro iyo ichapa dziviriro panguva yebhutsu system kuti ione kukanganisa (Musoro -firmware-yakasanganiswa tamper inoonekwa).
Vagadziri ve Purism Ivo vanga vasiri vega, asi vakaita chirongwa ichi mukubatana neNitrokey. Kana iwe usiri kuiziva nezvayo, ivo ikambani inozivikanwa nekugadzira yakavhurwa sosi makiyi e USB kuti igone kuchengetedzeka kunyorera uye kusaina kwedata pama laptops. Uye izvozvi mhedzisiro yesangano rave iro Purism Librem Key yakatsaurirwa kune vanoshandisa malaptop ekambani iri pasi pechiratidzo cheLibrem icho chauchanyatso kuziva.
Iyi bhuti chengetedzo chidziviriro inodzivirira kukanganisa nePurism firm laptops, uye inokwanisa kuchengeta makiyi kusvika 4096 ikakuruma RSA uye 512 ikakuruma ECC, pamwe nekugadzira zvakachengeteka makiyi matsva zvakananga kubva pachigadzirwa. Ichi chishandiso chinobatana mushe pamwe nehurongwa hwekuita malaptop kune bhutsu yakachengeteka pane yazvino Librem 13 uye 15 mamodheru.
Nechigadzirwa, vashandisi veMabhuku ePurism vachakwanisa kutarisa kana mumwe munhu akanganisa nemidziyo yavo kana software panguva yekutanga. Kutora mukana weiyo TPM chip, iyo USB skewer inopenya nayo girini girobhu kana michina isina kukanganiswa nayo, saka mushandisi anofanira kuvimba nehurongwa. Kune rimwe divi, kana ikashandiswa, mwenje waunoona unenge uri mutsvuku. Zvinoshamisa zvinoratidzika kwandiri sechinhu, pamwe chisingakanganisi, asi chinonakidza kuti ndinovimba chichaendeswa kune mamwe mapoka kwete kwete kune avo vePurism ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Pursim Inozivisa Laptop Tamper Kudzivirirwa
Nimbatus: mutambo wevhidhiyo kugadzira space drones